सरकारी नीतिका कारण औषधी उद्योग धारासायी बन्दै
नेपाल सरकारको नीति तथा ऐनको कारण नेपाली औषधी उद्योगहरु धरासायी बन्दै गएको छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.ओ.) ले ल्याएको मापदण्ड अनुसार नेपाली औषधी उत्पादक कम्पनी मर्कामा परेका हुन् ।
भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्दा नेपाल सरकारले लिने गरेको भन्सार तथा करको कारण नेपाली औषधी उद्योगहरुलाई मर्कामा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । नेपालभरिमै ५८ वटा औषधी उद्योग रहेको तथा २० देखि २२ वटा नयाँ उद्योगहरु थप्ने क्रममा रहे पनि ती उद्योगहरुलाई प्रोत्साहनको निम्ति नेपाल सरकारको पक्षबाट कुनै राहत नभएको उनीहरुको दावी छ । नेपाली औषधीहरुले नेपाली बजार नै ओगट्न सकेका छैनन् । विगतमा नेपाली औषधीले ४५ प्रतिशतसम्म बजार ओगट्न सफल भएकोमा गत वर्षदेखि खस्कदै ३८ देखि ३९ प्रतिशत मात्रै नेपाली औषधीले बजार ओगटेका छन् । नेपाली बजारमा भित्रिने भारतीय औषधीहरुसँग नेपाली औषधीले प्रतिस्पर्धा गर्नु नै करको कारण नसकी चुनौति बन्दै गएको छ ।
भारतीय तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातित औषधीहरुको गुणस्तरभन्दा नेपाली औषधीहरुको गुणस्तर पनि कम छैन । तै पनि नेपाल सरकारले नेपाली औषधी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै अवस्था रहे केही दिनमा नेपाली औषधी उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था आउने व्यवसायी उमेश बाबु गुप्ताले बताए । भारतबाट औषधी आयात गर्दा ४ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ, । तर त्यही औषधी यहाँ उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थमा नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार तथा १३ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य पारेको छ । यसले औषधीको मूल्य उताबाट ल्याएकोभन्दा बढि नै पर्छ । अनि नेपाली औषधीको बजार साफ नभई के हुन्छ र ? उनले तर्क गरे ।
वीरगन्जमा मात्रै १६ वटा औषधी उद्योगहरु छन् । त्यहाँको उत्पादन अन्य मुलुकको भन्दा कम छैन । यहाँ आयातित मेशिनहरु भारत लगायत चाइना, जापान, जर्मन जस्ता मुलुकहरु ल्याएका हुन् । त्यसमा चाहिने कच्चा पदार्थहरु पनि त्यही मुलुकहरुबाट आयात गरिएको छ । त्यसबाट उत्पादित औषधी पनि अन्य मुलुकको गुणस्तरभन्दा कम हुँदैन । तै पनि यहाँ उत्पादित औषधीहरु विदेशी औषधीको दाँजोमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी पछि परेको अवस्था छ । नेपालमा रहेका औषधी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधीले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म भार थेग्न सक्ने अवस्था थियो । यसलाई निर्यातका निम्ति नेपाल सरकारले नीति तथा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याए नेपालबाट विदेशी औषधी आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । नेपाल ६ प्रकारको औषधीमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । मलम, क्रिम र झोल प्रकारको औषधीमा नेपाल शतप्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको औषधी उद्योगहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारको सहयोग भयो भने दुई वर्षभित्र नेपाली औषधी विदेशी बजारमा निर्यात गरेर देखाइ दिने उद्योगीहरुले दाबी नै गरे ।
नेपाल भारत खुल्ला सिमाना भएको कारण भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजारहरुमा नेपालीभन्दा पनि भारतीय औषधीहरु छ्याप—छ्याप्ति रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने सरकारी पक्षले ठोस कदम चाल्नु पर्छ । नेपालमा उत्पादन हुन नसकेका औषधीहरुलाई आयात गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ । तर नेपालमा उत्पादित औषधीहरु नै आयात गर्दा नेपालमा उत्पादित औषधीहरु थन्क्याएर म्याद गुजार्नु वाहेक अरु केही हुन्न । यसले नेपाली औषधी उद्योगहरु धरासायी बन्दैनन् भन्ने हुन्न् ।
नेपाल सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि नेपाली औषधी उद्योगहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । गत वर्षसम्मको बजेटमा औषधी उद्योगहरुलाई समेटिएकोमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको पछि यस वर्ष बजेटमा पनि सम्बोधन गरिएको छैन । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो सम्वेदनशिल उद्योगहरुलाई सरकारी पक्षबाट गरिएको वेवास्ताको कारण भोलिका दिनमा यहाँ रहेको औषधी उद्योगहरु पनि विस्थापित हुने उद्योगीहरुको जिकिर छ ।
सोमवार, भदौ २३, २०७६, ०६:०९:००